Rosia: Olona Tompotany any Avaratra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2018 4:58 GMT
Den’ Olenevoda (Andron'ny Mpiompy Serfa vahiny), nankalazaina tamin'ny volana Marsa 2006, tao Kazym (Ugra, Okrug mizakatena Khanty-Mansi) – Sary avy amin'ilay mpisera Flickr ugraland/Irina Kazanskaya
Fomba iray hanombohana hianarana ny fiainana ao amin'ny firenena lehibe indrindra manerantany ny fijerena ny ambin'ireo sary famantaran’ i ugraland avy ao Okrug mizakatenan'i Khanty-Mansi (aka Yugra, na Ugra). Ny zavatra manaraka fantatrao, dia hamandrika toerana amin'ny sidina mankany Beloyarsky (mandalo Moskoa) amin'ny volana Marsa ianao mba hanatrika ny “lalaon'ny orsa” eo an-toerana: Manome rohy mikasika ny fikambanana izay mikarakara fitsidihana ny toby nômady (mpifindrafindra monina) i ugraland – “manampahaizana momba ny fitsidiham-paritra. Aza adinoina ny mitafy mafana.
Mpisera LJ kunstkamera nandefa sary roa mahavariana avy amin'ny toerana indizeny hafa ao avaratr'i Rosia – tanànan'ny Nes, feno mponina Nenets: eto sy eto. (Fampitandremana: mavesatra ny fikorianan-tserasera – saingy tena tsara jerena.)
Kanefa, ao Nes – tsy tahaka ny ao amin'ny manodidina [faritra Arkhangelsk], izay mandala ny nentin-drazana kokoa, manan-danja, saingy eo an-dalam-panjavonana – misy ny fahatsapana fiainana: mpifindrafindra monina ampahany, tsy misy dikany, tsy manana ny lasa sy tsy manana ho avy, saingy fiainana kosa na izany aza. Maro ireo “Burans” maikamaika, ankizy marobe, ary tsy foana ny fiangonana. Fiainana tsy maharitra izay nivadika ho trano maharitra.
Araka ny fantatrao, nikendry hametra ny fahaleovantenan'ny vahoaka vitsy an'isa ny fitondrana Sovietika- ary noho izany antony izany, nanao izay vitany izy mba hahatonga ny ankamaroan'ireo vahoaka Nenets sy [Komi] mba hitovy amin'ny olom-pirenena Sovietika tanteraka. Manomboka ny faha-7 taona, nentina teny amin'ny sekoly kilasimandry ireo ankizy mpifindrafindra monina, ary avy eo any amin'ny tafika, ary lasa olona hafa tanteraka izy ireo avy eo – amin'ny ankapobeny, nisotro toaka be loatra izy ireo, mpankatoa ary zara raha nampiasa ny tenin-drazany. Natao ho an'ny vahoaka Nenets “nahita fianarana” tahaka izany ny tanànan'i Nes ‘, foibem-panjakana. Olona eo amin'ny 1200 eo no monina ao ankehitriny – ahitana Nenets, Komi sy Rosiana. Ho an'ny Nenets, tsy tahaka ireo Komi, misy ny tombontsoa marobe izay heverina fa hanampy hiarovana ny lovan'izy ireo. Saingy indrisy fa nolaniana tamin'ny toaka izay tsy tena ilain'ny Mongoloid Nenets betsaka izany vola izany amin'ny ankamaroany. Mbola mianatra eny amin'ny sekoly kilasy mandry ireo zanaky ny “mpiompy serfa”, na dia somary nohamaivanina aza ny fitsipika momba ny fijanonan'izy ireo: rehefa mandalo miaraka amin'ny biby fiompiny ny ray aman-drenin'izy ireo, mahazo maka ny zanany hiaraka amin'izy ireo mandritra ny herinandro maromaro sy andro fialan-tsasatra izy ireo.